Asilimia, mmalite nke na-ewulite akụrụngwa dijitalụ iji jikọọ African MSMEs na akụ na ụba ego nkịtị, enwetala $ 2 nde iji zụlite otu ya, nyefee ọrụ ọhụrụ ma gbasaa n'ahịa ọhụrụ na East Africa.
Mmalite ahụ welitere $ 1 nde na ntinye ego tupu mkpụrụ sitere na ọtụtụ ndị na-etinye ego, gụnyere onye nchoputa unicorn oge abụọ, Fredrik Jung Abbou (onye nchoputa nke Kry na Lendo), Norrsken Impact Accelerator na ndị ọzọ a ma ama sitere na Europe dum. Ọ welitere $1 nde na ụgwọ ụgwọ nke gụnyere Bpifrance na GreenTec Capital Partners.
Ego a bu ụzọ nweta mkpụrụ ga-akwado uto na mgbasawanye nke otu ebe ego ụgwọ ga-enyere Asilimia aka ịgbatị kredit nye ndị MSME, na-enye ego achọrọ nke ukwuu iji nyere ha aka ịbawanye azụmaahịa ha.
Asilimia nọ n'ọrụ iwulite akụrụngwa ego dijitalụ nke akụ na ụba mba Africa nke kewasịrị nke ukwuu yana akwụkwọ, na ileba anya ọdịiche kredit $360 nke na-emetụta nde MSME nke kọntinent 150.
N'agbanyeghị na ọ na-atụnye ihe dị ka pasentị 38 nke GDP ndị dị na Sub-Saharan Africa, enweghị data ejirikọtara ọnụ pụtara na a na-ewere MSME dị ka nnukwu ihe egwu, na-ahapụ ụlọ ọrụ ego ọdịnala kpochie ha.
Ihe osise Asilimia
Na ọbụna na mba dị ka Kenya nke nwere ọnụ ọgụgụ ntinye ego dị elu karịa ọtụtụ n'ime kọntinent n'ihi ọbịbịa M-Pesa, ọtụtụ ndị MSME ka na-eji mkpịsị akwụkwọ na akwụkwọ edekọ azụmahịa ha, na pasent 30 nke uru ha na-eji na mkpanaka. ụgwọ azụmahịa ego.
Asilimia ewulitela ikpo okwu dijitalụ dị ọnụ ma dị mfe iji nke na-ahazi ịkwụ ụgwọ, nnakọta ego na ndekọ ego maka ndị nwe ụlọ ahịa, na-eme ka ọ dịkwuo mfe nyochaa ọrụ azụmahịa ha n'otu ebe.
N'iji naanị ekwentị mkpanaaka ha, ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike ịdekọ mmefu na ire ahịa ha, soro ụgwọ ndị na-echere ma nweta nghọta gbasara ego site na dashboard dị mfe nke na-arụ ọrụ nke ọma karịa iji pen na akwụkwọ.
Ha nwekwara ike jikọọ akaụntụ ego ekwentị mkpanaaka nkeonwe ma chekwaa ihe ruru pasentị 90 na ụgwọ azụmahịa.
Nke a jikọtara ọnụ na nkwenye nke data azụmaahịa na-emebi ndị nwe azụmaahịa, na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịnweta ọrụ ego dị iche iche, gụnyere mkpuchi, nchekwa ego na mbinye ego iji gboo mkpa ha kpọmkwem, mee ka uto ha na nkwado mmepe na obodo ha dịkwuo elu.
Mmalite ahụ na-eto eto na pasent 30 kwa izu, a na-ejikwa ngwa ahụ nkezi nke ugboro 90 kwa ọnwa kwa onye ahịa.
Dịka Tekwane Mwendwa, CEO na onye rụpụtara Asilimia siri kwuo, "Azụmahịa na-abụghị nke Africa bụ ọkpụkpụ azụ nke akụ na ụba ya ma anyị chọrọ imeghe GDP ha iji kwalite ọganihu na mmepe n'ofe kọntinent ahụ.
Ihe anyị lekwasịrị anya n'ime afọ ole na ole gara aga bụ ịmepụta ihe ngwọta nke na-arụ ọrụ na ego ọhụrụ a ga-enyere anyị aka iwebata ya n'ahịa ọhụrụ ma na-emetụta ndụ na ndụ nke ndị nwe ụlọ ahịa. "
Tekwane Mwendwa na onye ọchụnta ego France bụ Morgane Kablan tọrọ ntọala Asilimia iji wuo akụrụngwa ego izizi nke akụ na ụba na-abụghị nke Africa.
Emebere mmalite a na mmemme ọdụ F nke a ma ama na Paris ma bụrụkwa nke mmemme Norrsken Impact Accelerator.
Funda Sezgi, onye nchoputa na onye isi njikwa na Norrsken Impact Accelerator kwuru, "MSMEs na-arụ ọrụ dị mkpa n'ofe Africa na ime ka ọ dịrị ha mfe ime nke ọma bụ nnukwu maka kọntinent n'ozuzu ya.
Tekwane na ndị otu ahụ arụpụtarala ihe ngwọta na-arụ ọrụ ma anyị nwere obi ụtọ ịkwado ha ka ha na-akwalite ọganihu na mpaghara dị mkpa maka akụnụba Africa. "
Konga na-enye ọnụ ahịa kacha mma maka Black Friday taa
Ndị mmekọ FI Lagos AFEX ga-anabata nnọkọ mebere maka oke ohere na ohere Agritech Nigeria.